UAli Qamar, uMbhali kwiZifundo zokuRhweba
umbhali: UAli Qamar
U-Ali Qamar ngumbhali we-crypto onamava kunye ne-blockchain kwaye ukholelwa ngokuqinileyo kwii-cryptocurrensets ezinamatyala okusetyenziswa kobomi bokwenyani. UAli uthanda ukugubungela nasiphi na isihloko esinxulumene ne-TRON kwaye unomdla omkhulu kwezinye ii-cryptocurrency nkqo ezinje ngeRipple, iStellar, iBitcoin nokunye.
Khetha uMrhwebi oKhuselekileyo we-Intanethi kwi-Intanethi
NgoMvulo, Oktobha 14, 2019
Itekhnoloji iyaguquka kwaye ayibonisi zimpawu zokuma nangaliphi na ixesha kungekudala. Into ebangela umdla kukuba ikhokelele ekuphuculweni kwendlela izinto ezisingathwa ngayo, ngakumbi kwicandelo lezemali. Umzekelo, yenze ukuba ukurhweba kwangaphambili kwe-forex kube lula kakhulu ngoku phantse kuye nabani na onomdla. Nangona kunjalo, njengoko imibhiyozo iqhubeka malunga nefuthe elihle […]
Ukuqonda iBlockchain kunye nezizathu kufuneka uyisebenzise
Mihla le amajelo eendaba aya kube ezele zizikhukula ngamagama angabonakaliyo. Izityalo ezenziwe ngobuchwephesha, ubukrelekrele bokwenziwa, ii-ID zebhayometri, kunye netekhnoloji yeBlockchain kukuma kwazo zonke. Nangona kunjalo, oko basilelayo ukusixelela kukuba kutheni ibhloko ye-blockchain ibalulekile okanye nokuba kutheni kufuneka siyisebenzise. Inyani yile yokuba bambalwa kuphela abayiqondayo indlela blockchain […]
Izibonelelo zorhwebo lwexesha elide
Uninzi lwabantu lujonga kwimarike ye-forex njengeyona ndlela ilula kwaye ilula yokufumana ubutyebi ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, inyani kukuba intengiso ye-forex inokuba nzima, njengoko usenokungalindeli. Ngapha koko, kufuna ixesha kunye nomonde ukuze uphumelele. Enye yeendlela zokufumana inzuzo kwi […]
Abarhwebi aba-4 abaGqwesileyo ngalo lonke ixesha
Uninzi lwethu alunakuze lube ngomnye wabatyali mali abadumileyo emhlabeni, kodwa oko akuthethi ukuba asinakufunda kwimpumelelo yabo. Abathengisi abaphambili ngalo lonke ixesha khange bafikelele kumgangatho abakuwo ngokulandela nje iindlela ezisemgangathweni zokutyala imali-iindlela zabo ezizodwa ezibenza bahluke kwezinye iindawo zentengiso kwaye babanceda ukuba badume […]
Ukuphonononga iintlobo ezahlukeneyo zeZitayile zeNtengiso yeXabiso
NgoMgqibelo, Oktobha 12, 2019
Ukurhweba nge-Forex kuye kwaba lolona khetho lukhethekileyo kubatyali mali abaninzi mva nje. Ubuhle bokurhweba nge-forex kukuba bunokwenziwa naphi na nangaliphi na ixesha. Nangona kunjalo, yintoni eyenza ukuba inomdla ngakumbi kukuba ukhetha isitayile sokurhweba esifanele iimfuno zakho. Oko ke, kuthetha ukuba unga […]
Kutheni bonke abathengisi beNewbie kufuneka basebenzise iiMpawu ze-Forex
Imarike ye-forex yenye yeemarike ezilungileyo kwihlabathi kwaye isomelele. Intengiso ithengisa ngaphezulu kwe- $ 5 trillion ngosuku, kwaye abarhwebi abaliqela benza imali kwi-forex. Kodwa ngaba kulula kubathengisi abaqalayo? Iimarike ze-forex azikho lula njengoko kubonakala ngathi. Ngapha koko, i-novice […]
Ungayikhetha njani eyona VPS ye-Forex yokuRhweba ngeMali
Ngokungafaniyo nexesha elidlulileyo, xa kwakufuneka kakhulu ukuba umntu angene kurhwebo lwe-forex, kule mihla, yonke into yenziwe yalula. Udinga kuphela ikhomputha yakho, uxhumano lwe-intanethi kunye nokunikezelwa kwamandla kwaye uya kuba ulungile ukuhamba. Nangona kunjalo, khawufane ucinge xa ​​uphakathi kwintengiselwano, kwaye uhlangabezana nombane. […]
Iingcebiso ezili-10 eziphezulu malunga nendlela yokuLawula iMali yakho kwiNtengiso ye-Forex
Ukuphumelela kwimarike ye-forex kuthatha isisu kunye nokucwangcisa okuninzi. Isicwangciso esifanelekileyo kunye neendlela ziya kukusa kude kwintengiso kwaye zikuncede wenze ezona zigqibo zibalaseleyo. Iya kukubonisa eyona nto ungathengisa ngayo kunye nendlela yokulawula imali yakho. Ulawulo lwemali lolunye lwe […]
Izibonelelo ezi-5 zokusebenzisa iAkhawunti yasimahla yeDemo
Ngelixa iimarike ze-forex zikubonelela ngamathuba angenakubalwa enzuzo, ayisoze ibe nesiqwenga sekhekhe kuba ukurhweba kwangaphambili kubandakanya nenani elikhulu lomngcipheko, nawo. Kungenxa yoko le nto abathengisi kuyo yonke indawo bexwayisa abathengi babo, kuba xa kusenziwa iimveliso ezixhuzulisiweyo, ilahleko zinokugqitha kwimali oyifakileyo. Ngenxa yeso sizathu kanye, […]
Ukukhetha abarhwebi abaphambili bezoRhwebo
Ngokungafaniyo nexesha elidlulileyo, xa umrhwebi kwakufuneka asebenzise umnxeba ukutyala imali kwintengiso yezemali, kule mihla, ukurhweba nge-Intanethi kube lula kwinkqubo yotyalo-mali. Ubukho beqonga lomthengisi lenze ukuba intengiso ye-forex ibe yeyona nto ibalaseleyo emhlabeni. Okwangoku, yonke into ibonakala ilula, kodwa ude ufumane eyona imbi […]